Ubulungu - I-Foundation Foundation • Yiba ilungu
Uninzi lube ngamalungu eLizwi leLizwi ngenxa yothando lwabo lweencwadi zikaPercival, impembelelo enzulu ababenayo kubomi babo kunye nomnqweno wokusixhasa ukufikelela kufundo olubanzi. Ngokungafaniyo neminye imibutho, asinayo i-guru, utitshala okanye igunya elongameleyo. Injongo yethu kunye nokuzibophelela kukwazisa abantu behlabathi ngobugcisa obukhulu bukaPercival, UkuCinga nokuPhelela, kunye nezinye iincwadi zakhe. Sikhona ukuhambisa isikhokelo, ukuba siceliwe, kodwa sikwaxhasa ubulumko bokuzilawula-ukufunda ukuthembela nokuzibandakanya kwigunya lakho elingaphakathi. Iincwadi zePercival zinokusebenza njengesikhokelo sokunceda kule nkqubo.
Wonke amalungu eZiko leSiseko, kungakhathaliseki ukuba yeyiphi inqanaba lokuxhaswa oyikhethayo, uya kufumana iphephancwadi lethu lekota, Ilizwi (Umzekelo wesampula), kunye ne-40% isaphulelo kwiincwadi zePercival.
ILizwi Foundation lixhasa ukufundwa kweencwadi zikaPercival. Ngemagazini yethu yekota, uLizwi, senze indawo yokwazisa abafundi bethu ngeendlela ezahlukeneyo zokufunda. Xa umntu esiba lilungu leLizwi Foundation, olu lwazi lufumaneka kwimagazini yethu:
• Uluhlu lwamalungu ethu anomdla ekufundeni nabanye.
• Uncedo oluvela kwiLizwi leSiseko labo bafuna ukuza okanye ukuququzelela amaqela okufunda kuluntu.
Ubomi obunye emhlabeni luyingxenye yechungechunge, njengomhlathi omnye kwincwadi, njengenyathelo elinye kwintlambo okanye njengenye imini ebomini. Ingcamango yengozi kunye nobomi bomntu omnye kwihlabathi zimbini zeephene eziphambili zabantu. HW Percival